ချစ်လှစွာသော ဖောက်သည်တော်ကြီးတို့ရေ, နွေဦးရာသီဆိုတာအံ့အားသင့်ဖွယ်မှော်ဆန်ပြီး လှပတဲ့အချိန်အခါလေးတစ်ခုပါပဲနော်, ဟုတ်ပါတယ်မလား? ဒီလိုအချိန်အခိုက်အတန့်လေးတိုင်းကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေထုံမွမ်းပြီး
"စိတ်ကူးအိပ်မက်များအမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်လာပြီ" ပရိုမိုးရှင်းတွင်အနိုင်ရရှိသူဖြစ်လာရန် ဖော်ပြပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ:
၁. FBS အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ:https://my.fbs.com/registration
၂. သင်၏ FBS ပရိုဖိုင်ကို Facebook သို့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ (အပြာရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ):https://fbs.com/promo/dreams
၃. ယခုပို့စ်ကိုသင်၏ timeline တွင်ရှယ်လိုက်ပါ
၄. ယခုပို့စ်အောက်ရှိကွန်းမန့်တွင် သင်လိုချင်တဲ့လက်ဆောင်နဲ့ ဘာကြောင့်လိုချင်ရတယ်ဆိုတာကိုပါရေးခဲ့ပေးလိုက်ပါ!
သင်တို့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင် FBSကဖြည့်ဆည်းပေးနေပါသည်. ဖောက်သည်တော်တွေရဲ့အိပ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင် ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အတွက်လည်း အရမ်းကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်, ဒီမှာတော့ ယခင်ကဆုရရှိသူတွေရဲ့ စာရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်:
• အင်ဒိုနီးရှားမှ Johanis Ginting
• အင်ဒိုနီးရှားမှ Sugandi Lim
• မလေးရှားမှ Wan Mer
• အင်ဒိုနီးရှားမှSamsu Rizal
• ဘူဂေးရီးယားမှ Yordan Mitev
• အင်ဒိုနီးရှားမှMerlyn Rebecca S
အချိန်မဖြုန်းနေပါနှင့်! ဒီမှာ သင့်ရဲ့အတောင့်တဆုံးလိုအင်ဆန္ဒတွေ တကယ့်ဖြစ်လာစေမယ့် စစ်မှန်တဲ့အခွင့်အရေးရှိနေပါပြီ:
စိတ်ကူးအိပ်မက်များ တကယ်ဖြစ်လာပြီ: အာဒံအတွက် အကြားလက်ဆောင်
ဂျီဂျယ်လ်၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယားမှ ဆိုဖီယာနှင့် အာဒံ ဘို့အပ်စာသည် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၈အား - FBSမှသူတို့၏ စိတ်ကူးအိပ်မက်များ တကယ်ဖြစ်လာစေသည့်ကာလဖြစ်သောကြောင့် ဤလအား ဆန်းကြယ်တဲ့အချိန်ကာလအဖြစ် အမှတ်ရနေကြလိမ့်မည်။